စားပွဲတင် မီးဖိုချောင် | စားပွဲတင် မီးဖိုချောင် လောင်စာဆီ | Art-fire.com
Intelligent Bioethanol Fires နှင့် 3D Water Vapor Fires များသာ.
ကျနော်တို့အဝေးထိန်းအရက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်, ဇီဝအီသနော ventless လောင်စာမီးနှင့် 3D ရေငွေ့စူပါခေတ်မီဒီဇိုင်းများနှင့်လက်မှုပညာနှင့်အတူလောင်စာမီး. အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အီးလေပြီ / FCC သည် / IC အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းအတည်ပြုခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ရောင်းချ 100% တရုတ်ထံမှတင်ပို့ .
ကျနော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီဇိုင်းနှင့်လွယ်ကူစွာအိမ်မှာပိုင်ရှင်များအတွက် installed နိုင်ပါတယ်, ဒီဇိုင်နာများ, architectors.
အနုပညာရေငွေ့မီးလျှံနှင့်အတူ, အတူတူထိုင်ရင်း, အနီရောင်ဝိုင်သောက်သုံးနေစဉ်သင့်မိသားစုနှင့်အပေါင်းအဖေါ်များနှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှုကိုမျှဝေခြင်း, စကားပြော, playing, ရယ်မော ... ဒါကဂရိတ်ဖြစ်ရပါမည်!!! ခေတ်မီအတွင်းပိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဒီဇိုင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော 3D 3D ရေငွေ့မီးမော်ဒယ်များ။ ဝေးလံခေါင်သီသော Controller သို့မဟုတ် Mobile App ဖြင့်,တပ်ဆင်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ အနံ့မရှိပါ,ဆူညံသံ,အပူမရှိပါ,သာအတွင်းပိုင်းအလှဆင်သည်.
Ventless Bio Ethanol Burner ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပါ
သင့်အိမ်၌ဤလှပသောမီးဖို၏အရငျးနှီးလေထုကိုယူခဲ့ခြင်းနှင့်စင်ကြယ်သောပျူငှါနွေးထွေးသောပျော်မွေ့. အနုပညာအီသနောလောင်စာမီးလျှံနှင့်အတူ, အတူတူထိုင်ရင်း, အနီရောင်ဝိုင်သောက်သုံးနေစဉ်သင့်မိသားစုနှင့်အပေါင်းအဖေါ်များနှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှုကိုမျှဝေခြင်း, စကားပြော, playing, ရယ်မော ... ဒါကဂရိတ်ဖြစ်ရပါမည်!!! တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု: အားလုံးအထက်,အရည်အသွေး Survryors ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏နောက်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဝယ်ယူခြင်းမှလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည်,ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်း။ အနုပညာအားလုံးဇီဝအီသနောလောင်စာဆီများကိုမှန်ကန်စွာနှင့်ပြီးပြည့်စုံစွာလည်ပတ်စေရန်သေချာစေရန်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်စစ်ဆေးပြီးထုပ်ပိုးထားသည်။! ရောင်းပြီးနောက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု: ထက်ပိုအတူ 8 အလိုအလျှောက်မီးဖို system ကိုထောက်ပံ့အတွက်နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံများ,သင်၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအင်ဂျင်နီယာများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်3နှစ်အာမခံ
Ventless Etanol Burner ကိုထည့်ပါ
အနုပညာအီသနော burner ၏မီးတောက်နှင့်အတူ, အတူတူထိုင်ရင်း, အနီရောင်ဝိုင်သောက်သုံးနေစဉ်သင့်မိသားစုနှင့်အပေါင်းအဖေါ်များနှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှုကိုမျှဝေခြင်း, စကားပြော, playing, ရယ်မော ... ဒါကဂရိတ်ဖြစ်ရပါမည်!!! တရုတ်နိုင်ငံတွင်အသိဉာဏ်ရှိသောမီးသတ်စနစ်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အနေဖြင့်,ထက်ပိုမိုသောများအတွက်အသိဉာဏ်အီသနောမီးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မီးပန်းအဖွဲ့ 10 years.All devices များသည်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်နည်းပညာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်.
သင့်ရဲ့စမတ်မူလစာမျက်နှာစနစ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးကတဦးတည်း-button ကိုအဝေးထိန်းသို့မဟုတ်သင့် smart ဖုန်းမှတဆင့်.
လျှပ်စစ်အီသနော Burner AF50
စမတ်အီသနော Burner AF120
အနုပညာ-မီး ©မူပိုင် ©2022 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.